Cusmaan Abuukar “Guddoomiye Hayaan & team-kiisa waxay ku dedaaleen in xilligan adag caruurta Soomaalida laga caawiyo waxbarashada” - Somnieuws.com
Cusmaan Abuukar oo ka mid ah madaxda ururka Somali4all, dhinaca kalena safka hore kaga jira jaaliyada Soomaalida Zwolle, ayaa ku ammaanay guddiga jaaliyada Zwolle & nawaaxigeeda [Zwolle en omgeving] dedaaladda lagu caawinayo dadka Soomaalida ee degan Zwolle waqtigan adag ee lagu jiro, isaga oo u mahadceliyey dhalinyarada mutadawiciinta ah ee guddiga kala shaqeeya sidii caruurta Soomaalida lagaga caawin lahaa waxbarashada.
“Waqtigan adag ee lagu jiro waddanka waxaa aad loo xaddiday wax badan, iyada oo noloshii kalena ay si caadi ah u socoto, iskuulaadkii oo hadda la billaabay in maalmo cayiman la tago, horayna casharada [onine] loogu dhigan jiray, Guddoomiye Axmed Hayaan & team-kiisa waxay xoogga saareen in ay caawiyaan caruurta Soomaalida ee waxbarashadu ku adag tahay, si aysan kheyrkooda kaga harin, guryaha loogu tago, lana caawiyo. Sidoo kale, waalidiinta & cid kasta oo aan isku filneyn in garab la siiyo inta lagu jiro xilliga adag iyada oo loo eegayo qof kasta baahidiisa & duruufta uu ku sugan yahay” Ayuu yiri Cusmaan Abuukar, wuxuuna intaasi ku daray in Gemeentigu aad ula soco dedaaladooda, ayna caawimaad ka gaystaan.
“Team-kan waa wiilal & gabdho waxbartay, shaqooyin heer sare ahna haysta, qof kasta ee innaga mid ah wuxuu dhabarka u ritay ugu yaraan qoys ama 2 inuu caawiyo, waxaan qaadanay “initiatief” ah haddii annagu aynaan dadkeena caawin, yaa kale ee caawinaya.?” Ayuu yiri Cusmaan.
Cusmaan Abuukar, waxa kale oo uu sheegay in toddobaadkan Soomaalidu ay qayb weyn ka qaateen kulan ay ka soo qaybgaleen ururada muslimiinta ah, laguna qabtay masjidka Misbahoel Islam.
“Toddobaadkan, waxaan ka qaybgalnay kulan ururada ajnabiga ah ee muslimiinta ay kaga hadlayeen in masaajidka waqtiyada 5-ta salaadood, halka markii hore cod-baahiye [microphone] aan laga isticmaali jirin, hadda aadaanka loo isticmaalo cod-baahiyaha, markii ay arkeen in Soomaalidu “active” ka tahay kulamadaasi aad ayeey inoogu farxeen, waxaan ku faraxsanahay inaan Soomaalida ku metelno fagaarayaasha ay ku kulmyaan ururada ajaaniibta ah, sida; kuwa Turkida, Marookaanka & Surinaamta, waxaanna dedaalkaasi aan kaga mahadcelineynaa Guddoomiye Axmed Hayaan” Ayuu yiri Cusmaan Abuukar.
Cusmaan Abuukar, waxaa kale oo uu sheegay in Guddoomiye Hayaan saddexdii sanno ee uu xilka hayay inuu soo celiyey kalsoonidii ururada kale kala dhexeysay jaaliyada Soomaalida, taas oo ku ciyaaray sida uu sheegay Cusmaan Guddoomiyihii hore C/qaadir Nuune.
Cusmaan Abuukar, waxaa la waydiiyay sida uu u arko C/qaadir Nuune oo ah Guddoomiyihii hore ee jaaliyada in weli uu sheeganayo inuu jaaliyada madax u yahay, uuna qabanqaabo ugu jiro qabashada doorasho cusub.
“C/qaadir Nuune waxaan u malaynayaa 14 sanno in ay ugu filan tahay waqtigii uu innaga lumiyay haddaan reer Zwolle nahay, haddii aanan wax loo soo raacan, la lana xisaabtamin nasiib ayuu leeyahay, waxaan dhihi lahaa cid na kuguma haysato goobtaada ganacsiga, ee waxaad kala garataa wax aad adigu leedahay & wax ay Soomaali wada leedahay” Ayuu yiri Cusmaan, isaga oo intaasi raaciyay in loo sheegay in markii Zwolle albaab kasta laga soo xiray inuu u diga-rogtay Magaalooyin kale.
“ Annigu waxaan is lahaa wuu caqliyaystay laakiin riyadiisii ayuu ku jiraa, wuxuuna taagan yahay reer Zwolle annigaa [Manoply] ku haysan karo, wax ceeb la yirahdo mayaaqo, afkiisa iyo dhagahiisa isma maqlaan” Ayuu yiri Cusmaan, wuxuuna intaasi ku daray in ay haysato kalsooni darro.
Nuur Iikar “Waxaan u baahanahay dad goob joog inoogu noqdo meelaha wax lagu goynayo, haddii aan wakiilo qabin dadka kale kuuma hadlayaan” [WARAYSI]